मभेस समस्या समाधान विना संविधान कार्यान्वयन हुदैन – नेता चौरासिया
Thursday, 09 March 2017 20:47	Rate this item
नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ । राजनीतिक अवस्था अस्थिर छ । नयाँ संविधान भर्खरै मात्र जारी भएको छ । मधेसवादी दलहरुले आफ्नो अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । सिमाङ्कनको सवालमा मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व हामी सामु छ । सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी छ भनिन्छ यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो काम चलिहरेको मधेस आन्दोलनको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्यो । त्यसका लागि सरकार एक कदम पछाडी हटिदिनुपर्यो । पर्सादेखी झापासम्म एउटा प्रदेश हुन सक्ने अवस्था छैन् भने एउटा प्रदेश थपऔं न । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश थप्न सक्ने अनि पर्सामा एउटा प्रदेश थप्न किन नसक्ने ? निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा जुन फर्मूलाहरु अपनाइयो जनसङख्यालाई मुख्य आधार मानेर र भूगोललाई सहायक आधार बनाउने निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा , हो त्यहि आधारमा अपर हाउसमा प्रतिनिधित्वको सवालमा तपाई त्यहि फर्मूला फिट गर्नुभयो भने, त्यहि आधारमा सहमति गर्न खोज्नुभयो भने त्यहि पनि समस्या समाधान हुन सक्दछ । नागरीकतामा पनि केही नमिलेका कुराहरु छन् । खासगरी भाषामा त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ नि । यो सरकारमा बसेका उप–प्रधानमन्त्रीहरुले एकातिर संघियता नमान्ने संघियता विरोधी विचार बोकेका छन् । अर्कोतिर लोकतन्त्र नमान्ने अतिवादीहरु पनि यो सरकारमा छन् र केपी ओली आफैं अतिवादीको जनक हुन् । – अजय चौरासिया केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस Read 1061 times	Tweet
« ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा र बारामा सेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छु - ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ	वीरगन्ज जन्माउने एउटा ज्यूँदो इतिहासको अन्त्य-गिरीश गिरी »